Iindaba - iFiberglass Strip Strands
Imicu yeFiberglass equnyiweyo kubandakanya Imisonto eqingqiweyo ye-BMC, imisonto eqingqiweyo yeThermoplastics, Imisonto emanzi emanzi, I-Alkali-Resistant Chopped Strands (ZrO2 14.5% / 16.7%).
1) .Imicu eQingqiweyo yeBMC
Imisonto egawuliweyo ye-BMC iyahambelana ne-polyester engagcwaliswanga, i-epoxy resin kunye ne-phenolic resins.
Ukusetyenziswa kokusetyenziswa kokugqibela kubandakanya uthutho, ukwakha kunye nolwakhiwo, i-elektroniki kunye nombane, umatshini, kunye nomzi mveliso olula.
2). Imisonto egawuliweyo yeThermoplastics
Ukuma okutyunyiweyo kweThermoplastic kusekwe kwiarhente yokuhlangana kwe-silane kunye nolwakhiwo olukhethekileyo lobungakanani, oluhambelana ne-PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP;
Ukuma kwe-E-Glass okususiweyo kwe-thermoplastic kuyaziwa ngokunyaniseka kwe-strand, ukuhamba ngokugqwesileyo kunye nokulungiswa kwepropathi, ukuhambisa iipropathi zoomatshini ezigqwesileyo kunye nomgangatho ophezulu kumgangatho wemveliso egqityiweyo.
3.) Imisonto emanzi egawuliweyo
Imisonto emanzi egawuliweyo iyahambelana ne-polyester engagcwaliswanga, i-epoxy kunye ne-phenolic resins kunye ne-gypsum.
Imisonto emanzi egawuliweyo inomxholo wokufuma okumodareyithayo kwaye ihambisa ukuhamba okubalaseleyo, kubandakanya ukusasazeka emanzini nakwigypsum.
4.) I-Alkali Resistant Chopped Strands (iZrO2 14.5% / 16.7%)
Mna). Isiqendu I-Alkali-Resistant Strip Strand – (IZrO2 14.5% / 16.7%)
I-Premix imicu ecoliweyo yiglasi ephezulu enganyangekiyo yeglasi yefayibha esetyenziselwa ukusetyenziswa ngokubanzi okujolise ekuchazeni ezinye izinto kwaye kuveliswa kukusetyenziswa kokuphoswa okanye ezinye iinkqubo kwinxalenye ye-GRC ebunjiweyo.
Nokuba phantsi kweemeko zedosi ephezulu kulula kakhulu ukudibanisa, nasemva kokuxuba isihloko esihle. Ukuveliswa kwezinto eziqhelekileyo ze-GRC ezinjengemibhobho yamanzi okanye iibhokisi zezixhobo, okanye izakhiwo zokwakha ezifana neebhodi zokuhlukanisa izinto, i-zirconia umxholo we-16.7% wezinto zokuveliswa kwentambo yamandla okusebenza emva kwexesha
II). I-TEX ephantsi I-Alkali-Resistant Strip Strand – (IZrO2 14.5% / 16.7%)
I-Tex ephothiweyo imicu ecekeceke kukuphakama okuphezulu, i-tex ephantsi, i-alkali-resistant, i-fiber-fiber strand eqoshiwe yokwenza izinto ze-GRC kwiinkqubo zokuxuba ezomileyo okanye ezinye iinkqubo ze-premixing. Ingasetyenziselwa ukuveliswa kwezinto ezenziwe kwangaphambili kumanqanaba asemgangathweni e-GRC.
Inkqubo ye-arhente yokumanzisa eyenziwe ngokukodwa yenza kube lula ukudibanisa kunye nokugcina ukuthembeka ngexesha lokuxuba, ukuthintela ngokufanelekileyo ukunxiba kunye nokugcina iipropathi zokubopha xa zixutywe nezinto ezomileyo. Imisonto enobunzima obusisigxina obunye inokubunyusa ubume obuthile ngokuthatha inxaxheba kancinci, kwaye ngenxa yoko ivelise isiphumo sokomelela. Imveliso ifaneleke ngokukodwa ekulungiseleleni imixube yodaka kunye nepeyinti esele yenziwe.
III). Amanzi asasazeka I-Alkali-Resistant Strip Strand – (IZrO2 14.5% / 16.7%)
imisonto yamanzi esasazekileyo yinjongo ekhethekileyo yealkali enganyangekiyo yeglasi ifayibha ecoliweyo, esetyenziselwa ukuxubana nesamente kunye nezinye izinto ezifuna ukusasazeka okuphezulu. Ingakumbi umxube wodaka okhethekileyo wokunxiba okanye wokudaka ubumanzi kunye nezinye iimveliso ezikhethekileyo zorhwebo.
Inkqubo yearhente yokulinganisa imveliso inokusasazeka ngamanzi kwaye, xa ixutywe namanzi, inokusasazeka ngokwaneleyo kwi-monofilaments. Isetyenziswe kwipeyinti kunye nomxube wokulungisa ikhonkrithi, kunye nenkqubo ekhethekileyo yokuvelisa izinto ezithile zeGRC.